Dowladda Soomaaliya oo Cambaareysay Dhibaatada Lagu Hayo Soomaalida K/Afrika | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Dowladda Soomaaliya oo Cambaareysay Dhibaatada Lagu Hayo Soomaalida K/Afrika
Dowladda Soomaaliya oo Cambaareysay Dhibaatada Lagu Hayo Soomaalida K/Afrika
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadashay xasaradaha ajnabi naceybka ah ee ka jira dalka Koonfur Afrika ee lagu bar-tilmaameedsaday ajaanibta madowga ah ee dalkaasi ku nool oo ay Soomaalidu qeyb ka tahay.
War-saxaafadeed ay dowladdu kasoo saartay boobka iyo dilalka lagu hayo Soomaalida ayay ku sheegtay in ay aad uga xun tahay falalka waxshinimo ee lagu hayo muwaadiniinta Soomaalida, waxayna u jeedisay Koonfur Afrika in si degdeg ah arrintaas wax looga qabto, caddaaladdana la horkeeno dadka ka dambeeya dilalka iyo boobka Soomaalida lagu hayo.
Weerarrada lagu qaaday ajaanibta ku nool magaalooyinka Durban, Johannesburg iyo qeybo badan oo Koonfur Afrika ah ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 6 qof, in ka badan 5,000 oo kalena way ku barakaceen, iyadoo sidoo kalena dukaamo la gubay kuwa kalena la dhacay. Inta badan dadka ay saameeyeen rabshadaha waxay isugu jiraan dad qaxooti ah oo dalalkoodii uga soo cararay dagaallo iyo saboolnimo sida ay sheegtay Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrrimaha qaxootiga ee UNHCR.
Madaxweynaha Koonfur Afrika, Jacob Zuma ayaa baajiyay booqasho uu ku tagi lahaa dalka Indonesia si uu wax uga qabto rabshadaha, isagoo booqday mid ka mid ah xerooyinka ku yaalla magaalada Durban, halkaasi oo ay ku sugan yihiin kumannaan qof oo ajaanib ah oo ka qaxay rabshadaha. Wasiirka Arrimaha Gudaha Koonfur Afrika, Malusi Gigaba ayaa u sheegay warbaahinta in la xiray 300 oo qof oo lala xiriirinayo weerarrada lagu beegsanayo dadka muhaajiriinta ah.
Dowladda Koonfur Afrika ayaa lagu dhaliilay sida ay ugu guul-darreysatay in ay wax ka qabato weerarrada ka dhanka ah dadka Afrikaanka ah ee dalkeeda ku nool. Kooxo hubaysan ayaa weeraray dukaamo iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin ajaanib Afrikaan ah, iyagoo ku eedeeyay in ay kala wareegeen shaqooyinkii.
Ajaanib aad u badan ayaa ka cararay guryahoodii iyagoo ku sugan xerooyin ku meel gaar ah. Inta badan dadka muhaajiriinta ah ayaa ka soo jeeda Afrika iyo Aasiya. Waddamada deriska la ah Koonfur Afrika ee Zimbabwe, Malawi iyo Mozambique ayaa ku dhawaaqay inay muwaadiniintooda kala baxayaan Koonfur Afrika.
Dowlado iyo hay’ado caaalami ah oo u dooda xaquuqda aadanaha ayaa si kulul u cambaareeyay rabshadaha.
Koonfur Afrika waxa ku nool dad Soomaali ah oo isagu jira ganacsato, arday iyo qaxooti, kuwaas oo ay samayn ku yeesheen weerarrada lagu hayo dadka soo galootiga ah. Dowladda Koonfur Afrika ayaa waji gabax la kulmaysa kaddib markii dalal badan oo ku yaalla qaaradda Afrika ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu cambaareeyay weerarrada ay dadka dalkaas ku qaadeen Afrikaanka kale.
Waxaa xusid mudan in xilligii midab kala sooca uu ka jiray dalka Koonfur Afrika ay Soomaaliya shacab iyo dowladba u fidiyeen taageero dhan walba ah sidii dadka madowga ah ee Koonfur Afrika ay u heli lahaayene xuquudoodii uu dafiray xukunkii caddaanka ahaa ee dalkaas ka talin jiray.
Previous articleFAALLO: Yaa U Maqan Dhaawacyada Culus ee Yaalla Isbitaallada Muqdisho?
Next articleYaa Ka Mas’uul ah Dhallinyarada Tahriibeysa?